Epont ज्याक स्ट्यान्ड&बार्श ज्याक कार प्रयोगको लागि
हाम्रा उत्पादनहरू मुख्यतया ISA, स्पेन, स्पेन, स्पेन, बेलायत, कोरिया, क्यानाडा, क्यानाडा र आदि जस्ता देशहरूमा निर्यात गरिएको छ.हाम्रा ग्राहकहरूले धेरै OEM ग्राहकहरू समावेश गर्छन् जसले ट्रेन, अटोमोबाइल, फोरमोफ्ट र निर्माण मेसिनरीमा विशेषज्ञताका 10 मध्ये 10 भन्दा बढी कम्पनीहरूको रूपमा एक प्रमुख कास्टिंग आपूर्तिकर्ताको रूपमा सहयोग गरेका छन्.
अक्सर जैक ज्याकको बारेमा प्रश्नहरू सोधे
कम्पनी कहिले स्थापना गरियो?
200 2006 मा स्थापित
हामीले जाँच गरेपछि म कहिलेसम्म प्रतिक्रियाहरू पाउन सक्छु?
हामी तपाईंलाई कार्य दिन 12 घण्टा भित्र जवाफ दिनेछौं.
के तपाईं प्रत्यक्ष निर्माता वा ट्रेडिंग कम्पनी हुनुहुन्छ?
हामीसँग दुई आफ्नै कास्टिंग परिधानहरू र एक सी nc ्गाका मसिन कारखाना छ, हामीसँग हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बिक्री विभाग पनि छ. हामी उत्पादन र सबै आफैलाई बिक्री गर्छौं.
कसरी हामीलाई सामान वितरण गर्ने?
सामान्यतया हामी तपाईंको सामानहरू तपाईंलाई समुद्रमा पठाउँदछौं, किनकि हामी जैक्सिंग शहरमा छौं, र शंघाईका लागि हामी केवल 100 र 1 1500 किलोमिटर टाढा छौं।.
तपाई कुन उत्पादनहरू प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ?
हामी विभिन्न बोतल ज्याक र फ्लोर ज्याक उत्पादन गर्दछौं.